December | 2010 | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 21/12/2010
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ကေလး, ပညာေရး, မူၾကိဳ.	Leaveacomment
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: သရဖူ ဆုလဒ္.	Leaveacomment
ကျမ်းစာကို လေ့လာကြည့်သောအခါ ယုံကြည်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော သရဖူ (၅)မျိုးကို ဖေါ်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် သရဖူ ဆိုရာ၌ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုနေကြသော ကယ်တင်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရန် တစ်စုံတစ်ရာ ကြိုးစားအားထုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် သရဖူ ရရန်အတွက် အသက်တာထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ကြိုးစား အားထုပ်ရသည်။ အဖိုးအခပေးရမည်။ သရဖူ တစ်မျိုး စီတွင် ယုံကြည်သူများ၏ အကျင့် (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများကို အခြေခံ၍ ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်တွင် ထိုအရာများကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုတရားပလ္လင်ကို ဘီးမား တရားပလ္လင် (Bema Seat) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဤအမျိုးအစားသည် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပင် ပေးဆပ်ရန် ၀န်မလေးသောသူများ အတွက် ဖြစ်သည်။ မာတုရများနှင့် မာတုရများကဲ့သို့ပင် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပေးထားသူများသာ ရရှိနိုင်သော သရဖူဖြစ်သည်။ အတွက်ဖြစ်ပြီး ကျမ်းစာထဲ တွင် (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖေါ်ပြပါသည်။
ဤနေရာတွင် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် သေသည့်တိုင်အောင် (until death) ဟူ၍ ဘာသာပြန် ဆိုထားပါသည်။ မူရင်းတွင် သေခြင်းသို့ ဦးတည်သည်တိုင် (unto death) ဖြစ်ပါသည်။ မိမိပြောသည့် စကားကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းမှုမပြု။ မာတုရ အဖြစ်အသေခံရမည့် အခြေအနေကြုံသည့်တိုင် သစ္စာရှိနေ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ပြောပြီးစကားကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါလျှင် ထိုသရဖူကို ဆုံးရှုံးမည်သာ ဖြစ် သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိက ပြောချင်သော သူများမှာ “ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလ”တွင် ကြှုံတွေ့ရမည့် သူများ ကို ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပါသည်။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ကောင်းစွာသော တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါပြုပြီ” ဟုဆိုရာတွင် သူအသက်တာတွင် ဇာတိ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ခက်ခဲစွာ တော်လှန်ခဲ့ရသည်။ “တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါပြုပြီ”ဟု ပြောဆိုရာတွင် ထိုအသုံး အနှုံးမှာ စစ်သားတစ်ယောက်က တိုက်ပွဲတွင် ပြောဆိုသော စကားနှင့်တူသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ “ပြေးရသော လမ်းကို အဆုံးတိုင်အောင် ငါပြေးပြီ” ဆိုရာတွင် အပြေးသမားတစ်ယောက် ပြောဆိုသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအတွက် နေ့စဉ်အသက်တာအတွက် မာရ သွန်ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ရေးသားခဲ့ပြီးသော Post တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို ငါစောင့်ရှောက်ြပီ ဆိုရာတွင် စောင့်ရှောက် (kept)ဆိုသော စကားလုံးသည် လုံခြုံရေးသမားများ အသုံးပြုသော စကားလုံး ဖြစ်ပြီး သူစောင့်ရှောက်ရသော ပစ္စည်များကို ဂရုစိုက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အထက်က ပြောဆိုခဲ့သော စကားလုံးများကို ခြုံငုံလေ့လာ ကြည့်သော် ရှင်ပေါလု ဘ၀အသက်တာတွင် သူလုပ်ဆောင်ရမည့် အငန်းအတာ တာဝန်များကို ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခရစ်တော် ပြန်လာသော နေ့ရက်တွင် ရရှိမည့် ဆုသရဖူကို သေချာပေါက် ရရှိခံစားမည်ကို သိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ သူအတွက် ထိုနေ့ကိုသာ မျှော်လင့်နေတော့သည်။ မည်သည့် အခြေအနေကိုမျှ စဉ်းစားစရာမလို။ အသက်တာတွင် မည်သည့်အရာများကို ကျော်ဖြတ်ရသည်ဖြစ်စေ သူအတွက် ဆုသရဖူ အတွက် မျှော်လင့်ပြီး၊ ရရှိပြီး၊ ခံစားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်တော်ပြန်လာမည့် နေ့ရက်ကို မျှော်လင့် တောင့်တနေသည်။